Ihe ọkpọkọ mmiri na-eme abụghị ihe a na-ahụkarị, ụlọ ọrụ chọrọ ngwa ngwa iji meziwanye ọdịdị ha - Viga foset Manufacturer
Home blog Ihe mgbanaka na-emegharị abụghị ihe a na-ahụkarị, ụlọ ọrụ chọrọ ngwa ngwa iji meziwanye ọdịdị ha
Datebọchị ： 2020-10-29 Categories ：blog Nlele ： 54
A na-akọ na enwere ọtụtụ oge nke ihe mgbata "kụrụ ihu" na ahịa n'oge na-adịbeghị anya, nke siri ike ịmata ọdịiche dị n'etiti eziokwu na ụgha, nke na-eme ka ndị na-azụ ahịa nwee nnukwu nsogbu, na iguzosi ike n'ihe nye ika ahụ agwụla. N'oge nke ahaziri onwe ya, ngwaahịa ndị ama ama na-esiri ike ijide obi ndị na-azụ ahịa, ma ya fọdụzie ngwaahịa ndị e si n'akụkụ ọzọ depụtaghachi. Naanị site na iwusi mmata nke mbụ ike, bulie ogo nke ihe izizi, na izere ịdị n'otu, ụlọ ọrụ ọkpọkọ nwere ike merie ihu ọma nke ndị na-azụ ahịa na asọmpi ahịa ma biri n'ahịa ahịa ka ukwuu.
Homogenization bụụrụ akara aka a na-apụghị ịgbanahụ agbanahụ
Na ụlọ ọrụ, nsogbu nke ikike ọgụgụ isi mgbe niile abụwo ebe kachasị emetụta nke mebiri mmepe nke ụlọ ọrụ ọkpọkọ. Gigha ụgha nke atụmatụ ngwaahịa, echiche akara na ọbụna akara njirimara na-apụtakarị. Tụkwasị na nke ahụ, ọdịdị ọdịdị nke ọkpọ mmiri ahụ dị nnọọ mfe i imitateomi, n'ihi ya, ngwaahịa ndị a na-ere nke ọma na-enweghị ike ịgbanahụ akara nke idetuo.
Enwere ike ịhụ na ọnọdụ nke na-eme ka ngwaahịa ndị dị otú ahụ jupụta n'okporo ámá dabere n'akụkụ abụọ: nke mbụ, oge maka ntinye akwụkwọ ikike dị ogologo, ọ na-ewe ogologo oge iji mezue usoro zuru ezu; nke abuo, nkowa iwu nke i plaomi imebi iwu abughi ihe doro anya. Na-eme ụfọdụ azụmaahịa nwere ohere iji nweta uru. Ọbụghị naanị nke ahụ, uru a na-enweghị atụ nke i broughtomi imebi iwu nwere ike ọ bụghị naanị ịchekwa ọtụtụ ọrụ aka na akụrụngwa na mmepe ngwaahịa yana imepụta ngwaahịa, kamakwa weta ụlọ ọrụ ahụ ahịa ozugbo ma nyere ya aka iru ihe mgbaru ọsọ ya kwa afọ.
Ndi oru kwesiri ikwusi ike
Enterlọ ọrụ ọ bụla chọrọ isi obodo na nkwalite akara iji zụlite. N'ihe banyere ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ọkpọkọ ugbu a, imebi iwu na-emerụ ụlọ ọrụ ahụ. Ya mere, isi ihe na mmepe nke ụlọ ọrụ pọmpụ ugbu a bụ ime ka ihe mbụ sie ike ma melite ọdịdị.
Mgbe foset enterprise amalite na a ụfọdụ ọnụ ọgụgụ, ngwaahịa ahịa agbanweela na-akpaghị aka ghọọ ika ahịa, na mbụ imewe aghọwo otu n'ime ndị isi ihe maka ụlọọrụ ika mmeri. Dị ka anyị niile maara, ozugbo akpọrọ akara dị ka ị na-egiomi ịkpa ụda, a ga-ebibi ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Ya mere, ụlọ ọrụ ọkpọ ọkpọ kwesịrị inwe obi ike na imepụta ihe ọhụrụ ma mepụta ngwaahịa ndị ọzọ na-egbo mkpa ndị ahịa iji nweta ọnọdụ na ahịa ahụ.
N'ikwu okwu n'ozuzu, "ihu ihu" anaghị eme ihere, onye ọ bụla jọgburu onwe ya na-eme ihere. Iji zere idina ụdị onwe, ụlọ ọrụ pọmpụ ga-emerịrị ka amara nke mbụ ha sie ike ma nwee obi ike iji mepụta ihe ọhụrụ iji weghara obi ndị ahịa.
Mbụ: Iguzosi ike n'ezi ihe na-eweta enyemaka nye ụlọ ọrụ ọkpọkọ
Next: Ego Ole Ka Ọ Na-efu Keeplọ Mgbaze athlọ Ime ụlọ? Ọ Na-ewute Gị Mgbe Onyeisi Ahụ Na-agwa Eziokwu Eziokwu Anya mmiri!